वास्तविक शुद्रता के हो? – Easykhabar : Get News Easily
पानी नचल्ले, अछुत, नीच वा शुद्र कुनै एक वा सबै अथवा अझ थप उपमा दिए पनि वा नदिए पनि साथमा शिक्षा र कानूनमा जति नै विकास गरिएता पनि एउटा ठुलो समूदायलाई सदा अन्याय र अत्यचार युगौंदेखि गरिँदै आइएको छ। यसैको आधारमा जङ्ग बहादुरले १९१० मा ‘मुलुकी ऐन’ बनाएर शोषण गर्न उकास्छ अनि हामी मन्दिरभित्र प्रवेश निषेध गरेर उनीहरुको श्रममा मोज गर्छौं लाजै नमानि। आज जसरी हाम्रो भित्रि-चेतनामा सँस्कार बनेर यो शब्दले हामी मध्ये कत्तिलाई अपराध गर्न उक्साइरहेको छ नि, हो यसको पछाडि रहेको केही कारणहरुको विवेचना गरौँ न त।
१) जन्मको आधार
ब्रह्मजिले निर्माण गरिएका हामी मनुख्खेहरुमा जन्मस्थान अनुरुप पद वा सम्मान मिलेछ। मुखबाट उत्पत्ति भएको ब्राह्मण भए रे, काँधबाट उत्पत्ति भएको चैँ क्षेत्रीय, अनि तिघ्राबाट र पैतालाबाट सिर्जना गरिएको भएछन् वैश्य र शुद्र। हैन यस्तो कसरी भा हो? त्रिदेवमध्ये महान ब्रह्मजि यति अन्यायि त पक्कै थिएनन नै होला । अनि सोचौं त, कहाँ सम्भव होला यस्तो? तिलस्मि कहानि मात्र लाग्ने कुराको सायद प्रतीकात्मक अर्थ पोछ कि? मुखले मात्र बकबक गरेर जीवन यापन गर्न सक्षम केही योग्यहरु ब्राह्मण भए कि, युद्ध लड्न हातको काम बढि हुने अनि काँधमा जोडिएको हुन्छ हात यसैले उनीहरु क्षेत्रिय भनिए होला, उता कृषि, व्यापार-व्यावसाय गर्न दह्रो खुट्टा चाहिनेहरुलाई वैश्य भनेछन् क्यारे अन्तमा सेवा-कर्ममा लागेकोहरु झन् यता र उता दौडधुप गर्न पैताला बढि प्रयोग गरिएकोले शुद्र भनिइएछ कि
२) कर्मको आधारमा
माथि नै कर्मको कुरा नि गरिसकियो । उसो हो भने त आज निजामतिमा भएको सारा ब्राह्मणहरु शुद्र, व्यापारी ब्राह्मणहरु वैश्य, सैनिक सेवाकोहरु क्षेत्रिय हुनुपर्ने तर टस न मस गरेर जन्मेकै आधारमा ब्राह्मण नै भएर यो २१ औं शताब्दिमा पनि आफूलाई सर्वश्रेष्ठताको ताज सजाएर हामी दमन, अपहेलना र सतावट निर्लज्ज गरिरहेछौँ। हैन र?
३) अन्य आधार (योगिग)
योगिग आधारमा मनुख्खेको जन्मबाटै पाउने क्षमताको आधार ब्राह्मण, क्षेत्रिय, वैश्य र शुद्र निर्धारण हुन्छ। तसर्थ उसको भित्र गुण निरधारण प्राचीन कालमा गरि यी चारमध्ये एक कामको लागि गुरुकुलमा शिक्षा दिइन्थ्यो नकि जन्मको आधारमा हकपूर्वक पाइन्थ्यो। यसर्थ हामीमा जन्मसिद्धरुपमै मुलाधार चक्र (याैनसँग प्राय जोडिन्छ) जागृत हुन्छ। जसबाट बिस्तारै अरु चक्रलाई विकास गराउँदै माथि सहस्रार चक्रसम्म लैजान सकिन्छ। मूलाधार (मूल+आधार) चक्र हामीमा हुने मौलिक क्षमता हो जुन पशुमा पनि हुन्छ । अर्थात् शारीरिक मोजमज्जामा मात्र रमाउने मनुख्खे पशु सरह शुद्र भयो। यसबाटमाथि स्वाधिस्ठान चक्रदेखि मणिपुर चक्रसम्म जसले शक्ति सञ्चालन गर्छ ऊ वैश्य भयो । यसरी नै अनाहत चक्रदेखि विशुद्धि चक्र सक्रिय गर्नसक्ने क्षत्रिय र अन्त्यमा आज्ञा चक्र जागृत गर्ने मनुख्खे ब्राह्मण हुन्छ।
मूलाधार चक्रबाट माथि स्वाधिस्ठान चक्र विकास गर्ने क्रममा यी दुईबिच ‘ब्रह्म ग्रन्थि’ रहन्छ। यसलाई ताेडेर स्वधिस्ठान चक्र अर्थात स्व+अधिस(स्वयमको मालिक) बन्न पुगेपछि अझ माथि शक्ति सञ्चार गर्न सकिने हुनजान्छ। ब्रह्म-ग्रन्थिलाई इडा, पिङ्गला र सुशुम्णा नाडिको संगम मानिन्छ। यस्तै मणिपुर चक्रमा ‘विष्णु ग्रन्थि’ र आज्ञा चक्रमा ‘रुद्र ग्रन्थि’ रहन्छ। जब यी सबलाई निस्तेज गरेर जब कोही चेतनाको माथिल्लाे अवस्थामा पुग्छ ऊ नै ब्राह्मण हो।
हामीभित्रका मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा र सहस्रार लगायत सात चक्रहरुलाई हामी स्वयमले गरिने विकासका आधारमा यी चार पद निर्धारण गरिने यथार्थतालाई जन्मको आधारमा तय गरेर आज धेरै अगाडिदेखि अनेक बितण्डा मच्चाइयो र मच्चाइँदै छ। आज न त हामीभित्रको यी गुण पहिचान गरिन्छ न त यी क्षमतामा विकास गर्न सिकाइन्छ। तसर्थ शुद्र गुण भएको मनुवा ब्राह्मण भएका छन्। अनि अनेक अत्यचार गरिरहेछन्।
अन्तमा चेतना मापनको आधारमा पाइने यस्ता पद वा ओहोदाले पछि गएर जातिय रुप लिएर अनेक पीडा र कष्ट दियो र दिइरहेछ । त्यसैले वास्तविक शुद्रता के हो त? उत्तर सहज छ शारीरिक सुखमा मात्र लिप्त मनुख्खे नै शुद्र हो।